Maxamed Saalax oo ku biiray Liverpool
Liverpool ayaa 39 milyan oo euro kula soo wareegtay Maxamed Saalax oo garabka uga dheelayay kooxda Roma ee Talyaaniga, horayna ugu soo dheelay kooxda Chelsea.
Dacwad oogayaasha ayaa la sheegay inay ku taliyeen in xiddigan u dheela Barcelona uu bixiyo 255,000 Euro badalkii uu xabsi geli lahaa.
Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa lagu eedeeyay in uu lunsaday lacago canshuur ah oo gaaraya 3.6 milyan oo doolar.
Ruushka oo badiyay ciyaartii furitaanka koobka Confederations-ka
Tartanka kubadda cagta ee loo yaqaano koobka Confederations-ka ayaa ka furmay dalka Ruushka, ayadoo ciyaartii koobaad uu dalkaasi martida loo yahay 2-0 kaga adkaaday New Zealand.
Cristiano Ronaldo “oo doonaya inuu ka tago” Real Madrid
Xidiga kooxda Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ayaa aad uga carooday eedeynta ah inuu canshuur la baxsaday, waxaana uu doonayaa inuu kooxdaasi ka tago, sida uu BBC-da u sheegay qof aad ugu dhaw.
Griezmann oo kordhiyay qandaraaskiisa Atletico Madrid
Weeraryahanka Atletico Madrid, Antoine Griezmann, ayaa sanad ku kordhiyay heshiiska uu kooxdaasi kula sii joogaya, kaasoo hadda ku eg sanadka 2022.
Cristiano Ronaldo oo loo haysto canshuur bixim la aan
Orodyahanka caanka ah ee Usain Bolt ayaa si qiiro leh ugu guulaystay tartankiisa ugu dambeeyay ee uu kaga qeyb galo gudaha dalkaasi Jamaica.
Masuuliyiinta kubadda cagta ee Sacuudiga ayaa raaligalin bixiyay ka dib markii xulkooda qaranku uu doortay in uusan ka qayb qaadanin daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusayay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkii London.
Cristiano Ronaldo oo noqday ciyaaryahanka ugu mushaarka badan dunida
Ciyaaryahanka u dheela kooxda Real Madrid ee Cristian Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahanka dunida ugu mushaarka badan.
Kooxda Manchester united ee ka dheesha horyaalka dalka Ingiriiska ayaa markale hogaanka u qabatay kooxaha kubadda cagta ee ugu qaninsan caalamka.
Taageerayaal kubad cag oo daawanayay finaalka koobka Horyaalada Yurub ee Uefa Champions League ayaa waxaa ku dhacay argagax kaddib la maqlay wax qarax u eg.
Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee difaacato koobka horyaalada Yurub kaddib markii ay 4-1 uga badisay Juventus.
Ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka ayaa cumro u tagay magaalda barakaysan ee Makka isaga oo ku beegay bilawda bisha Ramadaan.
Francesco Totti ayaa ilmeeyay kaddib markii uu hadal ka jeediyay ciyaartii ugu dambaysay ee uu kooxdiisa Roma u dheelay kaddib 25 sano oo uu kooxdaasi u ciyaarayay.